Fitsikilovana artifisialy (AI) sy ny revolisiona amin'ny varotra nomerika | Martech Zone
Ny marketing nomerika no fototry ny rehetra orinasa e-commerce. Nampiasaina hitondrana varotra, hampitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika, ary hahatratra ny mpanjifa vaovao.
Na izany aza, tototry ny tsena ankehitriny, ary ny orinasa ecommerce dia tokony hiasa mafy handresy ny fifaninanana. Tsy izany ihany fa izy ireo koa dia tokony hanara-maso ny fironana teknolojia farany ary hampihatra ny teknika ara-barotra mifanaraka amin'izany.
Iray amin'ireo fanavaozana farany ara-teknolojia izay afaka manova ny marketing nomerika ny fahaizana artifisialy (AI). Andao hojerentsika ny fomba.
Olana lehibe amin'ny fantsom-barotra ankehitriny
Amin'izao fotoana izao dia toa mahitsy ny marketing nomerika. Ny orinasa ecommerce dia afaka manakarama mpivarotra na mamorona ekipa hitantana tambajotra sosialy, hikarakara doka misy karama, hanakarama influencer, ary hifampiraharaha amin'ny fampiroboroboana hafa. Na izany aza, olana maromaro marobe no mipoitra fa misy olana amin'ny fivarotana ecommerce.
Ireo orinasa dia tsy mahatratra ny fomba fanatonana ny mpanjifa - Ny tanjon'ny mpanjifa dia tokony ho tanjon'ny orinasa tsirairay. Na izany aza, tompona orinasa maro no mandalo an'io hevitra io ary mifantoka hatrany amin'ny tenany, ny ROI ary ny vokatra vokariny. Vokatr'izany dia mijanona ho manjavona hatrany ny fanokana-ho an'ny mpanjifa, ary matetika ny orinasa no manapa-kevitra ny hiatrika izany rehefa avy eo. Mampalahelo fa fahadisoana lehibe izany. Amin'izao tontolo ankehitriny izao dia fantatry ny mpanjifa fa mendrika azy ireo ary tsy tiany hoentina toy ny banky piggy. Raha tsy misy ny fomba fampifantohana ny mpanjifa dia tsy mahomby ny orinasa amin'ny famoronana tohanana mpanjifa tsy mivadika ary hahazo fifaninanana mihoatra ny mpifaninana.
Misy olana amin'ny data lehibe - Fantatry ny tompona fivarotana ecommerce ny maha-zava-dehibe ny fanangonana angona momba ny mpanjifa manoloana ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing mahomby. Ny fanangonana angon-drakitra ho an'ny mpanjifa koa dia manatsara ny traikefan'ny mpanjifa ary tokony hampitombo ny vola miditra amin'izany. Mampalahelo fa matetika ny orinasa dia miatrika fanamby amin'ny analytics lehibe. Izany dia mahatonga azy ireo tsy hahita vaovao lehibe izay afaka manampy azy ireo hitantana bebe kokoa marketing amin'ny fitondran-tena.
Raha ny tenin'ny mpanolotsaina amerikana sady mpanoratra Geoffrey Moore:
Raha tsy misy angona lehibe dia jamba sy marenina ny orinasa, mivezivezy mankamin'ny tranonkala toy ny serfa amin'ny làlambe iray.
Geoffrey Moore, Marketing ary fivarotana vokatra manelingelina ho an'ny mpanjifa mahazatra
Tena olana ny famoronana atiny - Ny zava-misy dia mijanona fa tsy misy marketing nomerika raha tsy misy atiny. Zava-dehibe ny atiny amin'ny fanatsarana ny fampahafantarana ny marika, hampisondrotana ny laharana ary hiteraka fahalianana. Ny atiny izay be mpampiasa indrindra amin'ny marketing nomerika dia misy lahatsoratra bilaogy, lahatsoratra, fanavaozana ara-tsosialy, bitsika, horonan-tsary, fampisehoana ary ebook. Na izany aza, indraindray ny orinasa tsy mahalala izay atiny mety hitondra tombony be indrindra. Sahirana izy ireo amin'ny famakafakana ny fihetsiky ny mpihaino kendrena amin'izay zarain'izy ireo ary mety hiezaka ny handrakotra azy rehetra indray mandeha fa tsy hifantoka amin'izay tena mety.
Ny dokam-barotra aloa dia tsy mahitsy foana - Ny tompona fivarotana ecommerce sasany dia mino matetika fa satria efa manana magazay izy ireo dia ho avy ny olona fa mazàna amin'ny alàlan'ny doka misy karama. Noho izany, mieritreritra izy ireo fa ny doka karama dia fomba azo antoka hisarihana haingana ny mpanjifa. Na izany aza, ny mpivarotra dia tokony hieritreritra fomba vaovao hanatsarana ny doka hatrany raha te hanao an'io amin'ny fomba mahomby. Lafiny iray hafa tokony hodinihina ny pejy fitobiana. Ho an'ny valin'ny marketing tsara indrindra, ny pejy fandraisana dia tsy maintsy apetraka araka ny tokony ho izy ary hiasa amin'ny fitaovana rehetra. Na izany aza, orinasa maro no manapa-kevitra ny hampiasa ny pejin-tranony ho toy ny pejy fitodiana, saingy tsy izany foana no vahaolana tsara indrindra.
Diso fanatsarana ny mailaka - Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hampiroboroboana ny vokatra dia ny marketing amin'ny mailaka. Miaraka amin'izany, ny orinasa ecommerce dia afaka manatona mivantana ny mpanjifa ary manana taham-panovana ambony kokoa. Ny mailaka koa dia manatsara ny fifandraisana amin'ny firaka ary azo ampiasaina amin'ny mpanjifa ho avy, ankehitriny ary taloha.
Mampalahelo fa ambany dia ambany ny tahan'ny fanokafana mailaka indraindray. Ka ny salanisan'ny fanokafana antsinjarany dia 13% fotsiny. Toy izany koa ny tahan'ny click-through. Ny CTR mailaka imailaka manerana ny indostria rehetra dia 2.65%, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny varotra.
StartupBonsai, antontan'isa momba ny marketing amin'ny mailaka
Fomba fanao tsara indrindra amin'ny vahaolana AI - Soa ihany fa ny teknolojia ankehitriny dia azo ampiasaina amin'ny varotra niomerika handamina saika ny olana rehetra voalaza etsy ambony. AI sy fianarana milina dia azo ampiasaina amin'ny fomba maro hanatsarana ny personalization, optimization, ary ny famoronana atiny. Ity misy fomba.
AI ho an'ny personalization tsara kokoa - Ireo orinasam-barotra ecommerce izay manara-maso ireo fironana farany dia mahafantatra fa ny AI dia azo ampiasaina hanatsarana ny personalization raha vantany vao tonga eo amin'ilay pejy ilay mpanjifa. Tsy mitovy ny mpampiasa rehetra, ary miaraka amin'i AI dia afaka manao toy izao ny marika:
Asehoy ny atiny natokana ho an'ny fitaovana
Manolora vokatra na serivisy miorina amin'ny toerana
Manomeza tolo-kevitra mifototra amin'ny fikarohana sy teny lakile teo aloha
Manova ny atin'ny tranokala miorina amin'ny mpitsidika
Ampiasao AI mba hamakafaka ny fahatsapana
Ny ohatra tsara indrindra amin'ny personalization ecommerce dia Amazon Tena manokana, izay mamela ny mpamorona hamorona fampiharana mampiasa teknolojia fianarana milina toa an'i Amazon.
Fitaovana matanjaka amin'ny famakafakana data lehibe - Mba hamoronana paikady mifantoka amin'ny mpanjifa, ny orinasa dia tokony hiasa amin'ny fanangonana, famakafakana ary fanivanana ny mombamomba ny mpanjifa marina. Miaraka amin'i AI, ny fanangonana data sy ny famakafakana dia mety mahitsy kokoa. Ohatra, ny fitaovana AI mety dia afaka mamaritra hoe inona ny vokatra novidiana indrindra, ny pejy inona no jerena indrindra, ary ny mitovy aminy. AI dia afaka manaraka ny dian'ny mpanjifa iray manontolo ary manolotra vahaolana mety hanatsarana ny varotra. Ohatra, amin'ny Google Analytics, ny mpivarotra dia afaka mijery ny fihetsiky ny mpanjifa amin'ny tranokala iray.
Sehatra AI an-tserasera ho an'ny famoronana votoaty - AI dia afaka mamaha ireo olana roa mahazatra indrindra amin'ny atiny — manafaingana ny famoronana atiny sy manadihady ny fihetsiky ny mpanjifa amin'ny atiny. Raha mikasika ny famoronana atiny, misy fitaovana AI marobe hita amin'ny Internet hanampiana ireo mpivarotra hananana sary marika ho an'ny lahatsoratra ara-tsosialy, lohateny lehibe ho an'ny lahatsoratra, na koa manoratra lahatsoratra bilaogy na mamorona horonantsary fampiroboroboana. Etsy ankilany, ny rindrambaiko matanjaka AI dia afaka manampy ny mpivarotra hamakafaka mihoatra ny demografika fotsiny. Izy io dia afaka manara-maso ny fihetsiky ny mpanjifa sy ny firotsahan'ny haino aman-jery sosialy. SASANY ohatra ny Sprout Social, Cortex, Linkfluence Radarly, sns.
AI dia afaka manatsotra ny fampiroboroboana an-tserasera - Amin'izao fotoana izao, Facebook sy sehatra maro hafa dia manome fitaovana AI hanampiana ireo mpivarotra hitantana ny doka amin'ny mora foana. Midika izany fa tsy ho very maina ny doka. Etsy ankilany, ny mpivarotra dia mahazo alalana amin'ny fampahalalana rehetra izay manamora ny fanatsarana ny doka. Etsy ankilany, Mampiasa AI ny Facebook mba hanaterana ireo doka ireo ho an'ny mpihaino kendrena. Ho fanampin'izany, ny pejy fipetrahana dia mitana andraikitra lehibe ankoatry ny doka. Ny famolavolana ny pejy fitobiana mety indrindra dia mety hitondra fiovana lehibe. AI dia afaka manampy amina singa roa lehibe amin'ny pejin-tsambo mahavariana—personalization sy famolavolana.
AI ho an'ny fanatsarana ny mailaka - Satria ny marketing amin'ny mailaka dia zava-dehibe amin'ny orinasa an-tserasera, AI dia afaka manatsara ny fomba famoronana mailaka. Inona koa, AI dia azo ampiasaina handefasana mailaka misy kalitao ary mampitombo ny vola miditra nefa mahomby. Amin'izao fotoana izao, ny fitaovana ampiasain'ny AI dia:
Manorata tsipika momba ny mailaka
Mandefasa mailaka anao manokana
Hatsarao ny fanentanana mailaka
manatsara fotoana fandefasana mailaka
Alamino ny lisitry ny mailaka
Ataovy mandeha ho azy ny takelaka
Ity fanatsarana ity dia afaka mampitombo ny tahan'ny fisokafana sy ny tsindrio ary mitarika amin'ny varotra bebe kokoa. Ho fanampin'izany, chatbots AI dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra, manampy amin'ny fampielezana mailaka ary hanome ny traikefa manokana natokana ho azy.
Ny marketing nomerika dia ampahany lehibe amin'ny fahombiazan'ny orinasa rehetra. Na izany aza, ny fivarotana ecommerce dia manana fifaninanana mandresy hatrany, ary amin'izany lalana izany dia mety hiatrika fanamby maro ny mpivarotra. Ohatra, ny famoronana atiny dia mety ho lasa mandreraka, ary ny fiatrehana data lehibe dia toa tsy ho vita mihitsy.
Soa ihany, androany, fitaovana maro be avy any AI izay manampy ny mpivarotra hanatsara ny fampielezan-kevitr'izy ireo ary hiteraka fidiram-bola ny orinasa. Manomboka amin'ny mailaka nohatsaraina ka hatramin'ny fampiroboroboana an-tserasera tsotra dia manana fahefana hanova ny fomba fanaovana marketing nomerika i AI. Ny zavatra tsara indrindra momba izany — vitsivitsy monja ny tsindry eo.
Disclosure: Martech Zone manana rohy mpiara-miasa Amazon ao amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: aiahy chatbotsai ohatraai sehatraai vahaolanaai fitaovanapersonalize ny amazonfahaizana artifisialylehibefanadihadiana data lehibefanentanana marikachat botstahan'ny click-throughfamoronana votoatympanjifa-centricHafanàm-po an-barotramailaka ctrstatistikan'ny marketing amin'ny mailakafanatsarana ny mailakaFacebook aiGeoffrey Moorezava-baovaofampiroboroboana an-tseraseravidiny misokatradoka misy karamapersonalizationppcseo filaharanastartupbonsai